162-ruux oo lagu badbaadiyay Badweynta u dhexeysa Libiya &Talyaaniga – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 162-ruux oo lagu badbaadiyay Badweynta u dhexeysa Libiya &Talyaaniga
In ka badan 160-qof oo isugu jiray muhaajiriin iyo qaxooti oo laga soo badbaadiyay badweynta dalka Libiya ayaa laga dajiyay dekedda Taranto ee kooonfurta dalka Talyaaniga,sida ay xaqiijiyeen hay’adda samafalka ee SOS Mediterranee .
Muhaajiriinta, oo ay ku jiraan 50 caruur ah iyo shan haween ah oo uur leh, ayaa waxaa badbaadiyay koox lagu magacaabo hay’adda samafalka ee SOS Mediterranee oo ay la socdaan dhaqaatiirta aan xuduudda laheyn ee MSF.
Dadka muhaajiriinta ah ee la badbaadiyay maalinimadii Jimcaha ayaa lagu waramay in ay wateen 2-doon oo kala ah caag iyo mid alwaax ah.
Maamulka talyaaniga ayaa ogolaaday dhamaan muhaajiriinta la soo badbaadiyey in laga dejiyo dekedda Taranto
Nicola Stalla, oo ah isku duwaha badbaadinta NGO-ga ee saaran markabka Ocean Viking ayaa sheegay in iyadoo lagu jiro xilligga qaboobaha ee badda Medetreaniamka ay suurtagashay in la badbaadiyo dadkaasi,balse haddii aysan jirin wax gurmad ah oo loo fidiyo muhaajiriinta ay dhici laheyd incimilada oo ka sii dareysa aawadeed ay adkaan laheyd xaaladdooda.
Bishii Oktoobar, Talyaanigu wuxuu dib u cusbooneysiiyay heshiis aad loo dhaleeceeyey 2017-kii oo ay la galeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka Liibiya si loo xakameeyo muhaajiriinta isku dayaya inay u safraan dalalka Yurub.
Diyaarad Nooca Wax basaasa ah, oo aan la garanaynin cidda leh...